Tour de France မှာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းကဘာလဲ။ - ပြင်သစ်နိုင်ငံ
အဓိက > ပြင်သစ်နိုင်ငံ > Tour de france tv အစီအစဉ် 2019 - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Tour de france tv အစီအစဉ် 2019 - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Tour de France မှာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းကဘာလဲ။
Tour de France ရုပ်သံလိုင်း, ဘယ်လိုအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လို
တစ်ခုလုံးပြင်သစ်နိုင်ငံNBCSN မှ NBCS တွင်ထုတ်လွှင့်မည့်ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၁၄ ကြိမ်မြောက်အဆင့်မှ လွဲ၍ သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲပရိသတ်များသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဖော်ပြရန် Peacock သို့နေ့စဉ်အစောပိုင်း၌ညှိနိုင်သည်။၂၇ 2021 ။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Tour de France သည်အများအားဖြင့်ဇူလိုင်လတွင်ကျင်းပသောရာသီ၏အကြီးမားဆုံးစက်ဘီးစီးခြင်းပွဲဖြစ်သည်။ Tour တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးမြင်းစီးသူရဲများသည်ပြင်သစ်တစ်လွှား ၂၁ ဆင့်တွင်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အနိုင်ရသူများအားရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်အကြာပြိုင်ခြင်းနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးသောဂျာစီပြိုင်ပွဲများစွာကိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းအဆင့် ၂၁ ဆင့်တွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်း၊ Tour de Frost သို့လာသူဤလမ်းညွှန်တွင်ခရီးစဉ်ကဘာလဲ။ Tour de France သည်ကြီးမားသောစက်ဘီးခရီးစဉ် ၃ ခုအနက်မှတစ်ခုလော။ ပြက္ခဒိန်တွင်အကြီးဆုံးဂုဏ်သတင်းကြီးသောပြိုင်ပွဲတွင်အလှူရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှု့သည့် Tour de France တွင်တစ်ပတ်ချင်းစီအဆင့် (၂၁) ခုပါဝင်သည်။ ယခုအဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားသည်။ ပြိုင်ပွဲခေါင်းဆောင်နှင့်အနိုင်ရသူအားလုံးကဆုံးဖြတ်သည်။ ခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုယေဘုယျခွဲခြားခြင်း (သို့) gcas ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီးစင်မြင့်တစ်ခုစီ၏ပထမပန်းတိုင်ကိုကျော်ဖြတ်သူအဖြစ်စင်မြင့်ဆုရှင်သရဖူဆောင်းထားသည်။ မြင်းစီးသူရဲများ ထွက်၍ ခြေထောက်များကိုရွေ့လျားစေရန်အတွက်ရင်ခွင်ထဲသို့ထွက်သွားကြသော်လည်းခရီးစဉ်သည်အားလပ်ရက်နှစ်ရက်သာရှိသည်။ သို့သော်ကားမောင်းသူများပြန်လည်သက်သာလာရန်အတွက်လာမည့်ရာသီတွင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်အောင်ပြေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တတ်နိုင်သမျှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြေးပြိုင်ပွဲစေရန်ရက်ပေါင်း။
ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်များမှတစ်ခုတည်းသောကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုကြောင့် ၁၉၀၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ ၁၀၇ ကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သောဘယ်လ်ဂျီယံ၊ နယ်သာလန်၊ ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်အခြားနေရာများတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ယခုပြိုင်ပွဲ၏ပထမအဆင့်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံသည်ထိုအခါသူတို့သည် Grand Departall ဟုလူသိများသည့်အစတွင်ပြင်သစ်သို့ထွက်ခွာသွားသည်။ ထို့ကြောင့် Tour de France အဆင့်များသည်ကွဲပြားသောအဆင့် ၅ ဆင့်အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်များသည်ဤအဆင့်များသည်အနည်းဆုံးယိမ်းယိုင်မှုများရှိပြီးအပြေးပြိုင်ပွဲများတွင်အသုံးပြုသည်။ တောင်တန်းများကိုပြင်သစ်ကျေးလက်အနှံ့ရွှေ့ပါ၊ ယခုသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နာရီကီလိုမီတာ ၇၀ ကျော်မြန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ရောက်ရှိနေသောကျွန်ုပ်တို့သည် Sprinters ခေါ်အထူးကုများကအနိုင်ရသည်။ သူတို့သည်အလွန်မြန်သောလမ်းကြောင်းသို့ပန်းတိုင်ဆီသို့ ဦး တည်သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်တောင်တန်းများရှိသည်။ ယခုခရီးစဉ်၏တောင်တန်းအဆင့်များသည်အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်ကြည့်ရှုသူများနှင့်ပြိုင်ကားသမားများဖြစ်လိုကြသည့်အတွက်ဤအဆင့်များသည်ပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းများနှင့် Pyrenees ကြားတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ နှင့်ဤအဆင့်များသည်သုံးပတ်အတွင်းမီတာထောင်ပေါင်းများစွာမြင့်တက်နေသည့်တောင်တန်းများ၊ youရာမတောင်ထိပ်သို့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့တက်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်မြင့်တက်သောတောင်တက်ပြီးနောက်ရှည်လျားသောကြိုးအဆင်းပြီးနောက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရာများဖြစ်တတ်ပြီး၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်သည်။ သင် Tourde france ကိုအနိုင်ရလိုလျှင်ယေဘုယျအချိန်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွင်သင့်အနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်ဖြစ်ရန်လိုသည်။ နာရီကိုဆန့်ကျင်သောအရာဟုခေါ်သည်။ မြင်းစီးသူရဲများသည်အထူးလေခွင်းစက်ဘီးများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားနိုင်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ အချိန်စမ်းသပ်မှုများသည်မည်သည့်onရိယာတွင်မဆို၊ ပြားချပ်ချပ်အမြင့်မှသည်တောင်ထူထပ်သောမြေပြင်အနေအထားအထိနှင့်စင်ကြယ်သောတောင်တက်တောင်တောင်တန်းများသည်ပြိုင်ဘက်များ၌အချိန်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးသည်။ အဖွဲ့လိုက်အချိန်စမ်းသပ်မှုများကိုတစ် ဦး ချင်းအချိန်ကာလစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကစီမံသည်။ ယခုအခါအဖွဲ့တိုင်းသည်အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုတွင်မောင်းနှင်ကြသည်။ ဤကြီးမားသော V ပုံစံဖြင့်ငှက်များပြောင်းရွှေ့လာသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန် finish ကိုလိုင်းတစ်ခုသင်္ဘောသားအဖြစ်စူပါမြင့်မားသောအရှိန်အဟုန်။
7 မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်း ab
ယခုအသင်းတစ်ဖွဲ့လုံးအတူတကွစတင်ပြီးနောက်ဆုံးပေးသောအချိန်သည်ပန်းဝင်မျဉ်းကိုဖြတ်ကျော်ရန်အတွက်ပဉ္စမမြင်းစီးသူရဲဖြစ်သော်လည်းများသောအားဖြင့်မြင်းစီးသူရဲရှစ် ဦး နှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့သူတို့မှာယာဉ်မောင်းရှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ အနုတ်သုံးခုက ၅ ခုဆိုတော့သူတို့ကတတ်နိုင်သမျှလုပ်နေတာယာဉ်မောင်းသုံးယောက်ရှိတယ်။ ငါတို့ Calla ကိုလှည့်ပြီးကောင်းကောင်းမီးရှို့တယ်။ သူတို့က finish line နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားရလိမ့်မယ်။ ကျန်အဖွဲ့တွေသူတို့ကိုမပါဘဲသွားခွင့်ပြုမယ်။ ခေါင်းဆောင်ယခု, ယခုအချိန်တွင်အသင်းအချိန်ရုံးတင်စစ်ဆေး, မှန်ကန်စွာပြုလျှင်, ကောင်းစွာရေနံစက်သည်အခြား kadres ထက်အားကြီးသောအားသာချက်များရှိပြီးဟန်, ဤဖြစ်ရပ်အမျိုးအစားနှင့်အတူရုန်းကန်ခြင်း, Tour de France ၏အနိုင်ရစုစုပေါင်းနိမ့်ဆုံးစုစုပေါင်းအချိန်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းမြင်းစီးသူရဲကိုဖြစ် ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှစ၍ ပါရီရှိအထင်ကရ Champs-Elysees တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သော ၂၁ အဆင့်အဆုံးတွင်မြင်းစီးသူရဲအုပ်စုသည် Peloton thepelotonis ဟုခေါ်သောခရီးစဉ်တွင်ယာဉ်မောင်းရှစ်ယောက်၏အသင်း ၂၂ သင်းပါဝင်ပြီး ၁၇၆ ခုမှရလဒ်မှာ ၁၇၆ ခုဖြစ်သည်။ thestart မှာယာဉ်မောင်း။
အဖွဲ့တစ်ခုစီသည်နှစ်စဉ်စက်ဘီးစူပါစတားများကိုမည်သူပိုင်ဆိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးသူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တိုက်ကြီးများအတွက်ဒုတိယအဆင့်အလံရိုင်းကဒ်များကိုအသုံးပြုထားသည့်အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်သေးငယ်သည်ဟုယူဆရသည်။ Superbig အသင်းများသည်ယခုအသင်းများသည်တိုက်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းများဖြစ်ရန်တိုက်တွန်းထားသည့်အသင်းများဖြစ်ပြီးရာသီ၏အကြီးမားဆုံးပြိုင်ပွဲတွင်ပြသရန် Bigworld Tour နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ အသင်းများနှင့်လာမည့်ရာသီတွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်ကမ္ဘာ့လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လက်မှတ်ထိုးရန်မျှော်လင့်နေသောကင်းထောက်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့၏တိုက်စပွန်ဆာများကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်စေရန်အဝေးပြေးလမ်းမများတွင်ပြိုင်ပွဲကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေလိမ့်မည်။ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်မောင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး ခန့်သည်တစ် ဦး ချင်းအဆင့်သို့မဟုတ်တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် Tour de France တစ်ခုလုံးအသာရရန်နှင့်ကျန်အသင်း၏ခေါင်းဆောင်များကိုအနိုင်ရရန်ရည်ရွယ်လိမ့်မည်။ အိမ်ဖော်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်ယခုအိမ်မှုကိစ္စများကို ၀ န်ထမ်းများအားတိုက်ရိုက်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ r တိုက်ခိုက်မှုအရှိန်နှေးစေရန် Toredomestiq လူများသည်ခေါင်းဆောင်၏စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းသိမ်းရန်လေအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်ကိုလျှော့ချရန်၊ ဒေသခံများသည်အစားအစာများစုဆောင်းရန်၊ အမှာစာလက်ခံရန်အသင်းကားများသို့ပြန်သွားကြသည်။ မင်းခေါင်းဆောင်များအတွက်အဝတ်ပုလင်းများရရန်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်တွင်တစ်ခုရှိခဲ့လျှင်သင်၏ကားသည်သင့်ကားကိုမရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းဘေးတွင်တာယာများထိုးဖောက်ခဲ့ပြီ၊ စာသားအနေဖြင့်သူတို့ကိုမကြာမီပြိုင်ပွဲများသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်စက်ဘီးတစ်စီးသို့မဟုတ်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ဘီးကိုပေးလိုက်ပါ။ စင်မြင့်တစ်ခုစီသည်အနိုင်ရသူတစ် ဦး တည်းသာရှိပြီး Tour သည်ကားမောင်းသူတစ် ဦး တည်းသာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤအောင်ပွဲသည်အသင်းဖော်ရှစ်ယောက်လုံး၏စံနမူနာယူထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်အိပ်မက်ကိုအောင်မြင်စေသည်၊ ခရီးစဉ်သည်လှပသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသည့် Kaleidoscope ရောင်စုံအရောင်များကိုပြင်သစ်ကိုလှန်လှော။ လှပစပွန်ဆာလိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆယ်ကျော်သက်ဂျာစီဒီဇိုင်းများကိုရဲရင့်သောအရောင်များဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံစံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သင်ယခုသင်၏အဝတ်အစားကိုရှာဖွေပြီးနားလည်နိုင်သောပုံမှန်အသင်းသားအဖွဲ့အားလုံးသည်၊ အဆင့်တစ်ခုစီ၏အဆုံးမှာကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်လေးခုအနက်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏ခေါင်းဆောင်အားချီးမြှင့်မည့်အထူးအရေးကြီးသောဂျာစီအင်္ကျီလေးခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အဝါရောင်ဂျာစီသည် Le Mayo Jean ဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ပြိုင်ပွဲကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့သည့်ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းအော်တိုကြောင့်ထူးခြားသောအဝါရောင်စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Tour de France မြင်းစီးသူရဲများအနက်အထင်ကရဂျာစီနှင့်အဝေးဆုံးလမ်းကြောင်းတွင်စုဆောင်းထားသည့်အချိန်သည်ဂျာစီသည်အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ ၂၁ အကုန်တွင်ဤဂျာစီကို ၀ တ်ဆင်သူကိုယခုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်၊ Tour de France သည်သက်တူရွယ်တူများနှင့်ပရိသတ်များအားတစ်သက်တာလုံးလေးစားမှုကိုရရှိသည်။ ဆုငွေယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ယူရိုဖြင့်ဖြူ le Mile Block ဂျာစီသည်အဖြူရောင်ဂျာစီသည်ပြိုင်ပွဲ၏အကောင်းဆုံးငယ်ရွယ်သောမောင်းသူဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ၂၅ နှစ်အောက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဇန်န ၀ ါရီလကသက်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲနှစ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအဝါရောင်ဂျာစီနှင့်အဖြူရောင်ဂျာစီတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အဝါရောင်ဂျာစီများသိမ်းထားရန်ဖြစ်နိုင်သည် Eye ကိုယခု ဦး စားပေးသည်။ ထို့နောက်ရပ်တည်မှုတွင်ဒုတိယအနေဖြင့်လူငယ်မောင်းသူသည်အကောင်းဆုံးလူငယ်မောင်းသူခရီးစဉ်အဆုံး၌အဖြူရောင်ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ Lumaio ver ဟုခေါ်သောအစိမ်းရောင်ဂျာစီသည်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးတွင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးအတွင်းပရင်တာဂျာစီဖြစ်သည်။ ကားမောင်းသူကိုအပြီးသတ်မျဉ်းကိုဖြတ်ကူးရန်ရရှိနိုင်သည့်ရမှတ်များကိုနေ့တိုင်းချီးမြှင့်သည်၊ သို့သော်ရမှတ်ရမှတ်မရောက်မီတွင်မသွားမီတွင်ပြုလုပ်သောအလယ်အလတ် Sprint များဖြင့်သွားသည့်လမ်းကြောင်းသည်နေ့စဉ်အချက်များအပြင်တစ်နေ့တာ၏စင်မြင့်ပေါ် မူတည်၍ ရရှိနိုင်သည့်အချက်များကိုရနိုင်သည်။ လူမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
Start-finish Sprint ရမှတ်များကိုအလယ်အလတ်တန်းပြေးများနှင့် finish sprint များတွင်လည်းကောင်း၊ ပြိုင်ပွဲ၏အဆုံးတွင်ရမှတ်အများဆုံးရရှိသည့်ယာဉ်မောင်းသည်အစိမ်းရောင်ဂျာစီကိုလည်းကောင်းရမှတ်များကိုပေးသည်။ ယခုဤဂျာစီသည်အများအားဖြင့်အနိုင်ရခြင်းသို့မဟုတ်အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်အဆင့်များကိုအနိုင်ရသည့်အခါရမှတ်များစုဆောင်းပြီးထိပ်တန်း ၁၅ တွင်သူမနိုင်သည့်အဆင့်များ၌ပုံမှန်အဆုံးသတ်ပြီးမြင့်မားသောတောင်တန်းများတွင်ဝေးကွာသောနေရာများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သည်။ သင်အနိုင်ရရန်အခွင့်အရေးမရှိသည့်နေ့ရက်များအစိမ်းရောင်ဂျာစီ၏ဈေးသည်ယူရိုနှစ်သောင်းငါးထောင်ဖြစ်သည်။ ပထမအနိမ့်ပိုင်းများအတွက်အဓိကတောင်တက်တစ်ခု၏ထိပ်ဆုံးရှိအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်အစက်အပြောက်ဂျာစီသည် la moi poirous ဖြစ်သည်။ မြင်းစီးသူရဲများထိပ်သို့ရောက်ရန်ရရှိနိုင်သည့်အမှတ်အရေအတွက်သည်တောင်တက်ခြင်း၏အဆင့်အလိုက်ကွဲပြားသည်။ ပို၍ ခက်ခဲလေတောင်တက်ခြင်းယခုအချိန်တွင်ယာဉ်မောင်းသူအားအချက်အချာကျသောတောင်တန်းများသည်ယိုယွင်းနေသောဂျာစီကို ၀ တ်ပြီးယူရို ၂၅၀၀၀ နှင့်အတူအိမ်သို့ယူသွားသည်။ ခရီးစဉ်၏အဆုံး။ Sprinters အကြောင်းပြောကြရအောင်။ Sprinters တွေဟာများသောအားဖြင့်သူတို့အသင်းဖော်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့အသင်းဖော်တွေနောက်ကွယ်ကနေလေကိုကာကွယ်ဖို့ပြားချပ်ချပ်အဆင့်တွေရဖို့ရည်ရွယ်ကြတာပါ။ နည်းပညာပိုင်းကနေပြိုကွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းပြcourseနာတွေကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ သူတို့ဘယ်တော့မှလေကိုဘယ်တော့မှမထိကြဘူး၊ နောက်ဆုံးအမြင့်မီတာ ၁၀၀ အထိ peloton ၏ရှေ့ပိုင်းတွင်အမြဲတမ်းပုန်းအောင်းနေကြသည်၊ သူတို့၏အသင်းဖော်များ၏နောက်ကွယ်မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းဖြင့်အောင်ပွဲကိုကျော်လွှားရန်ကြီးမားသော ဦး ဆောင်မှုပေးခဲ့သည့်အတွက် Sprinter လုပ်နိုင်သည့်ပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာပင်စွမ်းအင်အမြောက်အများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးသင်မြန်ဆန်ပါသည်။ Sprinter တစ်ခုသည်အလွန်ထူးခြား။ အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Sprint ကိုအနိုင်ရသောယာဉ်မောင်းများသည်မြင့်မားသောတောင်များ၌ရှင်သန်ရန်ခက်ခဲသည်။ သငျသညျအဆင့်များစွာ alon အနိုင်ရခဲ့ကြပေမည်, ထို Tour Sprinter tendenzie ll နာရီပေါင်းများစွာတစ်ခုလုံးကိုရပ်တည်မှုအတွက်ဆုရရှိသူနောက်ကွယ်မှနာရီအတူတူဖော်ပြချက်၌ရှိ၏ g တောင်တက်ခြင်းအဆင့်ကိုစင်ကြယ်သောတောင်တက်သမားများကအနိုင်ရရှိသည်။ ဤမြင်းစီးသူများသည်တောင်တက်ခြင်းတွင်အလုပ်ရှာရန်အလျင်အမြန်တောင်တက်သမားများဖြစ်လေ့ရှိပြီးခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအနိုင်ရရန်ရည်ရွယ်သောမြင်းစီးသူရဲများဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြိုင်ပွဲတွင်အဝါရောင်ဂျာစီကိုစိတ်မဝင်စားသောတောင်တက်သမားများလည်းရှိသည်။
၎င်းတို့သည်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများနှင့်တောင်တန်းများရရှိရေးအတွက်သာရည်ရွယ်ထားသည်။ ယခုခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အနိုင်ရလိုသောမြင်းစီးသူရဲသည်တောင်များကိုကောင်းစွာတက်နိုင်ရမည်ဖြစ်ရာအလားအလာရှိသောလိဂ်၌ကြီးမားသောကွာဟချက်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်သူတို့၏ပြိုင်ဘက်များသည်ရပ်တည်မှုတွင်အချိန်များစွာဆုံးရှုံးရလိမ့်မည် တစ် ဦး ချင်းအကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်မှုများသည်အထူးသဖြင့်စင်ကာပူလူမျိုးများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ များသောအားဖြင့် Tour de france ၏တစ်ကြိမ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်းအချို့ကိုမူအနိုင်ရလိုသောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးအနိုင်ရသည့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ် ဦး သို့မဟုတ်သုံး ဦး သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသည်။ မိနစ် ၃၀ မှတစ်နာရီအထိအချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်ရသောအချိန်ကာလကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ရမည်။ အရည်အချင်းနှင့်အနိုင်ရသည့်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်သာတကယ်ကောင်းလျှင်ပြိုင်ဘက်များအနေဖြင့်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းအနိုင်ရရန်အလားအလာရှိသည်။ အချိန်စမ်းသပ်မှုသည်အပြီးသတ်လိုင်းပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးမြင်းစီးသူရဲသုံးယောက်အတွက်နေ့စဉ်အပိုဆုကြေးများကိုပေးသည့်စမ်းသပ်မှုအပြင်ယခုအချိန်ကိုရရန်တောင်များ၌အစာရှောင်ခြင်းတက်ခြင်းကိုသာမှီခိုနေသည့် Agc ပြိုင်ဘက်ထက်ကြီးမားသောအားသာချက်ရှိလိမ့်မည် ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယနှင့်တတိယနေရာများတွင်အမျိုးသမီးများသည် Peloton နှင့်အနီးဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ သုံးပတ်ကြာ Grand Tour သည် Girorosa တွင် ၁၀ ရက်တာ ၀ င်ပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဇူလိုင်လတွင်စတင်လေ့ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာယောက်ျားအမျိုးသားပြိုင်ပွဲ၏စင်မြင့်နှင့်အတူတူပင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းကျင်းပခဲ့သည့်ကတည်းက tour defrance လည်း le tour defrancea အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏တစ်နေ့တာပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာပဲရစ်ရှိအဲလီယက်စ်ပြိုင်ပွဲများကိုလှည့်ပတ်မောင်းနှင်နေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများစက်ဘီးစီးခြင်း၏မျက်နှာပေါ်တွင် Sprinters အုပ်စုကြီးများကအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအမှန်တကယ်တန်းတူညီမျှအားကစားကို ဦး တည်သည့်ကြီးမားသောခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကိုမြင်ပြီးရှင်သန်လာဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ gcn အပြေးပြိုင်ပွဲခရီးသွား see ည့်သည်တွေကိုကြည့်ဖို့ငါတို့အကြိုက်ဆုံးနေရာကိုဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာအမှားတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကနည်းနည်းလေးဘက်လိုက်မှုရှိပေမယ့်ဒီခရီးစဉ်အပြင်ငါတို့မှာအများကြီးရှိပါတယ် တစ်နှစ်ပတ်လုံးလူမျိုးကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရင် gcn ကအသစ်လား။ Race Pass တွင်သင်လိုချင်သည့်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်စင်မြင့်ပရိုဖိုင်းများ၊ စတင်စာရင်း၊ ပြိုင်ပွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်နေ့စဉ်ပေါ်လွင်ချက်များနှင့်အခြားကောင်းသောအရာများစသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ သင့်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်စေ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆန်ခါတင်စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသည် tour de francethe ကြီး၏ပြပွဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့လျှင်ယခင်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲများကိုသင်မတွေ့ဖူးပါကခရီးစဉ်သည်အကောင်းဆုံးသောစက်ဘီးစီးခြင်းကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအသက်ရှုပေးသည်။ အကယ်၍ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပြိုင်ပွဲများနှင့်ခရီးစဉ်များကိုသင်စိတ်ဝင်စားနေသူတစ် ဦး ဦး နှင့်သင်သိလျှင်
သူတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေဖို့ဒီဆောင်းပါးကိုပို့ပေးပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းတို့နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်
Tour de France သည်ယနေ့တီဗွီတွင်လား
တိုက်ရိုက်တီဗီ2020 ၏လွှမ်းခြုံပြင်သစ်နိုင်ငံEurosport, ITV4 နှင့် S4C မှာညနေခင်းမီးမောင်းထိုးပြမှာပါ။
Tour de France ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။
Theပြင်သစ်နိုင်ငံPeacock Premium တွင် USA တွင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ခုနစ်ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုရနိုင်သည်။ Peacock Premium တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းကသင့်အားတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၄.၉၉ (သို့မဟုတ်ကြော်ငြာမပါဘဲ ၉.၉၉ ဒေါ်လာ) ကျသင့်မည်။ FloBikes ကထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေဒါမှာ။ နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းသူကသင့်အားဒေါ်လာ ၁၄၉ ကျသင့်မည်။၂၉ ။ 2021 ။
၂၀၂၁ Tour de France ကိုဘယ်သူထုတ်လွှင့်မလဲ။
အား NBC အားကစား
Tour de France ကိုမည်သို့အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။
ဘယ်လိုTour de France ကြည့်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည်Tour de France ကိုကြည့်ပါနေထိုင်ပြီး ad-အခမဲ့Eurosport app နှင့် Eurosport.co.uk တွင်။ iOS နှင့် Android အတွက် Eurosport app ကိုယခုရယူပါ။၅
၂၀၂၀ တွင် Tour de France ရှိပါသလား။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်မှစက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်အထိ။
ယနေ့ရုပ်မြင်သံကြားပေါ် Tour de France ဘယ်အချိန်မှာလဲ
ဘယ်အချိန်မှာ 2021 ဖြစ်ကြသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံအပေါ်ပျေါလှငျ? Highlights များကို ITV4 တွင်ညနေ ၁၉း၀၀ တွင်ပြသသည်။ ၂၀:၃၀ မှဖြစ်မည့်ပထမအဆင့်မှအပအထူးအာရုံစိုက်မှုကို Eurosport 1 တွင် ၂၀း၂၀ တွင်တွေ့ရမည်။၂၈ 2021 ။
Tour de France မှာဘယ်လမ်းကြောင်းရှိသလဲ
ရုပ်သံလိုင်း: NBCSN၊ NBCချန်နယ်ရှာဖွေသူ: Comcast Xfinity, Verizon Fios, Spectrum / Charter, အမြင့်ဆုံး / အမြင့်ဆုံး၊DIRECTV, Dish, AT&T U ကျမ်းပိုဒ်, fuboTV, Sling ။ ) Live stream: NBC Sports Live | စလင်း | ဒေါင်းတီဗီ| fuboTV - မင်းမှာ cable ရှိရင် NBC Sports Live ကနေသင် login အထောက်အထားကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။၂၆ 2021 ။
၂၀၂၀ Tour de France ကိုမည်သို့အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။
သင်လုပ်နိုင်သည်Tour de France ကိုကြည့်ပါ2021 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအခမဲ့Fubo TV (USA) မှတစ်ဆင့် Eurosport Player (UK) & NBC နှင့်အတူ။ သင်လည်းရနိုင်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံအသက်ရှင်သည်အခမဲ့ထုတ်လွှင့်သည်ITV Hub နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်အခမဲ့အကယ်၍ သင်သည်အခြားနိုင်ငံများမှဖြစ်လျှင်ဆက်သွယ်မှုအတွက် VPN လိုအပ်သည်။
၂၀၂၁ Tour de France ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုနိုင်မလဲ။
ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲစောင့်နေက2021 Tour က de ပြင်သစ်အသက်ရှင်သည်inအမေရိကန်? NBC Sports သည်အဆင့်တိုင်းကိုထုတ်လွှင့်သည်၏က2021 Tour က de ပြင်သစ်NBC, NBCSN မှတစ်ဆင့်အသက်ရှင်သည်။ NBC ၏ Peacock အက်ပလီကေးရှင်းသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၄.၉၉ ကျသင့်မည့် Premium tier package မှတစ်ဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလွှင့်ထုတ်လိမ့်မည်။06.28.2021
Tour de France ကို TV ပေါ်မှာဘယ်မှာကြည့်လို့ရမလဲ။
NBC နှင့် NBCSN သည် 106th Tour de France ၏အဆင့် ၂၁ ဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး NBC Sports Gold သည်စင်ကာပူမှ စတင်၍“ Cycling Pass” ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။
Tour de ပြင်သစ်တွင်အဆင့်မည်မျှရှိသနည်း။
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးသည် ၂၁ ဆင့်ပါဝင်ပြီး ၃,၄၇၂.၃ ကီလိုမီတာ (သို့) ၂,၁၁၇.၆ မိုင်ရှည်သည်။ Tour de France အစီအစဉ်အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
၂၀၂၀ Tour de France ဘယ်မှာစပြီးအဆုံးသတ်သလဲ။
၂၀၂၀ Tour de France ၏ ၁၀ ကြိမ်မြောက်သည် ၂ ရက်ပထမနေ့ပြီးနောက်ကီလိုမီတာ ၁၇၀ အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ မြေပြန့်ဒေသတွင်ကျွန်းတစ်စုံပါဝင်ပြီး Ile d'Oléronမှစတင်ကာ Ile de Réပေါ်တွင်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Tour သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးကျွန်းနှစ်ကျွန်းပေါ်တွင်အဆုံးသတ်သည်။